TALIYE KU XIGEENKA CIIDANKA BIRMADKA OO EEDEEMO TAGRIFAL AH LOO SOO JEEDIYEY | Toggaherer's Weblog
Hooyo Kawsar Cabdi Cabdillaahi oo ah hooyo dhashay shan carruur ah, ayaa ku eedeysay Taliye-ku-xigeenka ciidanka Birmadka Somaliland Maxamuud Ducaale inuu isaga oo adeegsanaya shaadhka dawladda uu sifo sharci-darro ah uga dumiyey gurigeeda oo ku yaal Degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa.
Hooyo Kawsar oo shalay saxaafadda ugu warrantay barxadda gurigeeda laga dumiyey, ayaa iyada oo ilmaynaysa sheegtay in jagada ay guriga ka dhisatay dawladda hoose siisay dabayaaqadii 1999, isla markaana ay haysato sharciyadiisii oo dhammaystiran, balse uu Taliye-ku-xigeenka ciidanka Birmadku ku qabsaday, isaga oo ku doodaya lahaanshaha iyo mulkiyadda dhulka aqalku ka dhisnaa.
Waxayna Hooyo Kawsar xustay in ay Taliye-ku-xigeenka iskula dacwoodeen dawladda hoose ee Hargeysa oo hore dhulka u bixisay, taas oo ay sheegtay in markii dawladda hoose ay aragtay waraaqaha iyo sharciyadda lahaanshaha ay haysato iyada lo xukumay mulkiyadiisa, Taliye-ku-xigeenka lagu wargeyey inuu faraha kala baxo sheegashada jagada la isku haysto, taas oo uu isaguna ka biyo-diiday isaga oo ku adkaysanaya inuu meesha leeyahay.
Hooyo Kawsar oo sharraxaad ka bixinaysay qaabka uu Taliye-ku-xigeenka Birmadku uga dumiyey aqalka, sheegtay in gaadhi nooca loo yaqaano Serf-ta uu aqalka oo jiingad yar ahaa dhinac walba kaga dumiyey iyada oo ay carruurtii yaryarayd ku jirto.
Hooyo Kawsar oo ka waramaysa sidii dhacdadaasi u dhacaydana waxay tidhi; “Anigu waxaan ahay gabadha leh sandaqadan la dumiyey, waxa ii yimid nin gaadhi seerafa wata, waxaana la socday sadex askari, saddexdii askari waxay istaageen dibada, isaguna gaadhigii ayuu guriga xagga dambe kaga dhuftay, hadana laba jeer ayuu dhinacyada kaga dhuftay, markaa waan cararay oo carruur sandaqada huruday ayaan kala soo baxay, waxaanan u yaacnay dibada.
Markii ay jaarkii yimaadeen ee booliskii loo soo sheegay wuu iska tagay, wax adduunyo ah oo aan dan ka lahaana ma jirto oo waxan ku qaboobay markii aan anrkay in ay carruurtaydu ii wada bad qabaan, dhulkana sharcigisii oo dhan ayaan u haystaa ninkaas oo lagu magacaabo Maxamuud Ducaale ayaa isaga oo shaadhka dawlada adeegsanaya aqalkaygii sifo sharci-darro ah ku dumiyey, waxaanan ka yaabbanahay shaadhka dawlada ma waxa loo sitaa in dalka lagu ilaaliyo mise in hantida maatida lagu xoogo,arintaasi waa mid aan u dhaafayo jawaabteeda xukuumadda iyo shcabiga Somaliland intooda damiirka leh.”
Haweenay kale oo dadka jaarka ah, isla markaana arkaysay markii aqalka laduminayey ayaa iayada oo sidii wax u dhaceen saxaafda uga waramaysay waxay tidhi; “ninku wuu noo yimi, markii dambena waxa uu tagay saldhigga Maxamed Mooge, wuxuu u doontay laba askari waxaanu ku yidhi, ‘Hareeraha iska kay taaga, waxaanu intuu gaadhiigii galay ayuu gurigii ku dhuftay, hadana gaadhigii ayaa uu mar labaad ku dhuftay gurigii, waxaannu hareeraha guriga la wada dhacay gaadhiga, aakhirkiina wuu dumiyay.dabadeed subaxdii ayuu ku soo kalahay isagoo wata labaatan askari iyo gaadhi dhayna ah, waxaanu qaatay sandaqadii uu dumiyay, wixii ka hadhay guriga wuxuu la dhacay dhagaxaan. Waxaanu ahaa nin ka tirsan ciidammada Booliska oo la yidhi wuxuu haystaa ciidan.
Guriga gabadhii iyo carruurteedii way iskaga yaaceen, waxaan degganaa xaafadda muddo toddobo sannadood ka badan, intii aan xaafaddan daganaa ninkan waxaan arkay laba jeer oo kaliya, gabadhan ayaana intaasiba ku noolayd oo y daganayd.”
Caaqil Maxamuud Warsame oo isna ka mid ah dadweynaha xaafada ku nool ayaa saxaafada uga waramay dhibaatada meesha kadhacday iyo guriga la dumiyey. “anigu waxaan ka mid ahay odayaasha xaafadda, waxay igu yidhaahdeen arrinkaas ayaa jira ee kaalay odaynimo noo dhex gal. Waxaanu nimi sandaqadii oo gaadhi la saaray iyo bilayska oo markaa dhaqaaqay. Intaas ayaan horta anigu ka soo gaadhay, markaa waxaan filayaa in sandaqadii la geeyay Saldhigga Maxamed Mooge, waxaanu ahaa nin dagaallansan oo aan hadalba karayn.
Waxana ila socday nin xildhibaan ah oo la yidhaahdo Jaamac Ismaaciil Shabeel, waxaanu caayay xildhibaankii, dabadeedna xildhibaankii wuu isaga tagay.”
Baashe Ibraahin Cilmi oo isna ka mid ah odayaasha xaafada oo arintan ka hadlay ayaa yidhi; “Anigu ninka waxaanu ugu tagnay nabadgalyo ahaan iyo dhex-dhexaadin, markii aanu u yeedhnay waxay isku bilaabeen ninka la yidhaahdo Jaamac Shabeel, dabadeedna wuxu nagu yidhi “aniga ayaa sharciya, waana taliye ka tirsan ciidammada Booliska.”
Taliyaha saldhiga booliiska Maxamed Mooge oo weriyayaashu booqdeen si ay wax uga weydiiyaan sababta gurigan uu u dumiyey sarkaal ciidamada ka tirsan iyo waxaay arrintaa ka qabteen, ayaa ka gaabsaday in uu wax faahfaahina ka bixiyo arintan, balse waxauu sheegay in ay baadhis ku hayaan sidii wax u dhaceen, dhakhsana ay natiijo u soo saari doonaan.
Waxayna weriyayaashu xarunta saldhigga ku arkeen burburka dhismihii sandaqada ladumiyey oo dhex daadsan, arintaasi oo dadweynaha xaafadu kabixiyeen dareen cadho leh.